जनतासँग म्याण्डेट लिएर मात्र कुनै निर्णय लिनुपर्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » जनतासँग म्याण्डेट लिएर मात्र कुनै निर्णय लिनुपर्छ
जनतासँग म्याण्डेट लिएर मात्र कुनै निर्णय लिनुपर्छ
मधेश आन्दोलनका चिरपरिचित नेता जितेन्द्र सोनल हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जहिले पनि संघर्ष नै गर्नुभएको छ । जे प्राप्त गर्नका लागि उहाँले संघर्ष नै गर्नुभएको छ । पार्टी निर्माणको कुरा होस्, वा पार्टीमा आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको कुरा होस् आजसम्म सबै कुराका लागि उहाँले संघर्ष गरेर नै प्राप्त गर्नुभएको छ । बाराको आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सफल जितेन्द्र सोनल बौद्धिक नेताको रुमपा पनि गिनिन्छ, अधिकाँश समय आफ्नो क्षेत्रमा नै बिताउने जितेन्द्र सोनल काठमाडौ आएको मौका पारेर पार्टी एकीकरण, मधेशी मार्चा र सरकारलगायतका विषयमा कुरा गरेका थियौं, प्रस्तुत राजपाका महामन्त्री सोनलसँग गरिएको कुराकानीः
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पहिलो चरणको चुनावमा सहभागि भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि चुनावमा जानका लागि मनस्थिति बनाएको जस्तो देखियो कस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–विगत दशवर्षदेखि मधेशवादी दलहरु आन्दोलनमा छन् । पहिलो सविधानसभाको चुनावपछि सत्ताको दोडधुप बाहेक अधिकाँशसमय संघर्षमै बित्यो । सत्ताको दौडधुपमा लागेका कारणले कतिपय दलहरु विभाजित पनि भए जुन जनताको चाहना थिएन । हामी आफैमा विभाजित भएर आन्दोलन गर्दा मधेशी जनताले हामीलाई पटक पटक एक भएर आउन आग्रह र दवाव दिएकै हो । र, जनताको दवाव र राजनीतिक आवश्यकताले हामी एकीकरण गरेका हौं तर एकीकरण भएसँगै हामीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ कि राजपा नेपाल चुनावमा जानेछ । त्यो सरासर गलत हो । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौ कि सविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग लिँदैनौ । चुनावको घोषणा हुँदा पनि हामी आन्दोलनमा थियौं त्यो बेला हाम्रो एकीकरण पनि भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघर्षमै छौ र भनेका छौ यथास्थितिमा हामी चुनावमा जाँदैनौ ।
तपाईहरुको मागप्रति प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लचिलो भएको हो ?
–हामीलाई पनि बडो आश्चर्य लाग्यो । शक्तिको आगाडी मान्छे कसरी झुक्दो रहेछ भने कुरा आफैले अनुभव गरेको हुँ । वैशाख ७ गतेअघि हामी विभिन्न पार्टीमा छरिएर बसेका थियौं तर जब हामी छ दल मिलेर नयाँ शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनायौं त्यसमा त मधेशी जनता खुशी भए नै, सरकार थर्कमान भए । वैशाख ८ गते नै राजपासम्मलित मधेशी मोर्चालाई बोलाएर लचक भएर प्रस्तुत भइ यी यी संशोधन हुन्छ, यसलाई यसरी गर्ने त्यसलाई त्यसरी गर्ने सबै कुरा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नु भयो जो यसअघि हामीले देखेका थिएनौ तथा अनुभव पनि गरेका थिएनौ । त्यति मात्र होइन त्यही दिन कृष्ण सिटौला, कृष्णबहादुर महारा, लक्ष्मण लाल कर्ण र पेसल ढकाल सम्मलित एउटा कार्यदल पनि बनायो जसले सहमतिको बुँदाहरुमाथि अध्ययन गर्ने थियो । र, त्यो दिनदेखि सबै कुरा सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्न थाल्यो । हामी पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लियौ र भन्यौ कि यही तरिकाले सविधान संशोधन भयो भने हामी पनि चुनावमा भाग लिन्छौ । हामी चुनावको विरोधी होइनौ, हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्ने शक्ति हौं । तर जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म चुनावको माहोल बन्दैन । सविधान संशोधन विधेयक पारित हुनै लाग्दा जुन प्रकारको हरकतहरु भयो त्यसले हामीलाई संशकित बनाएको छ । सरकारले सविधान संशोनध गर्ने भनि तयार भएपछि देशमा चुनावको माहोल बन्न लागेको थियो तर केही दलहरुको भूमिका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यस्ता हरकतहरु भइरहेको अवस्थामा सविधान संशोधन हुन्छ र तपाईहरु चुनावमा जानुहुन्छ भने विश्वास गर्ने आधार के त ?
–हामीले अहिले दुई प्रकारका मागहरु राखेका छौ । एउटा सरकारले पुरा गर्ने र अर्को व्यवस्थापिकाले पूरा गर्ने । व्यवस्थापिक संसदबाट सविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ त्यसको लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ त्यसका लागि सरकारलाई म धन्यावाद दिन चाहन्छु । सरकार सकारात्मक रुमपा अगाडि बढीरहेको छ । तर ३३ प्रतिशत भन्दा कम त्यो भन्दा ३० प्रतिशत भन्दा कम मत पाएका एउटा दल जो १८१ (एमाले) सिट ल्याएको जसले पुरै देशलाई बन्दी बनाएर राखेको छ । सविधान संशोधन हुन नदिने भन्दै सम्पूर्ण परिवर्तनको बाधक बनेर बसेका छन् । जब कि सम्पूर्ण मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, अल्पसँख्यकहरु आन्दोलनमा छन्, अधिकारका लागि वर्षौदेखि सडकमा छन् । बहुमत जनताले सविधानको अपनत्वलाई ग्रहण गरेको छैन । ९० प्रतिशत बहुमतको आधारमा सविधान बनाएको दावी गर्ने ठाउँबाट ६० प्रतिशत जनता भनिरहेका छन् कि सविधान त्रुटीपूर्ण छ र त्यसको संशोधन मागिरहेको छ । अर्को खालको जुन माग हाम्रो छ त्यसका लागि संसदको आवश्यकता पर्दैन । घाइतेलाई उपचार, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाय तथ स्थानीय तहको सँख्या बढाउने सविषयमा संसदबाट मात्र हुने कुरा हो तर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको छैन । यदि यसले मूर्तरुपले लिदैन भने हामी कसका लागि चुनाव लड्ने ? हामी चुनावमा जान्छौ र हाम्रा कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारलाई प्रहरीले तपाईमाथि मुद्दा छ भनि समातेर लग्यो भने त्यसबेला हामी के गर्न सक्छौ त्यसले हामी भन्छौ । भएका सहमतिहरु चाँडै समाधान गर्रौ ।
मधेशी मोर्चाका एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा गएको छ यसलाई तपाईको पार्टीले कस्तो रुपमा लिएको छ ?
–यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेर हामी परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहेका छौ । यस अवस्थामा हामीले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरु विर्सिनु हुँदैन । यदि राजनीतिकमा केही फेरबदलको आवश्यकता छ, निर्णयमा केही परिवर्तनहरु गराउनुछ भने जनताको विचमा जानुपर्छ । हामीले के गर्दैछौ भनि जनतालाई पनि थाह हुनुपर्छ किनभने तपाईले जुन अश्वासन जनतालाई दिएर आउनु भएको छ, त्यसको प्रतिक्षामा बसेका हुन्छ तर एकाएक तपाई प्रतिवद्धता तोड्नुहुन्छ भने त्यसको सिधा असर जनतामा जान्छ् । सिमांकनको बारेमा यो गर्यौं, घाइतेको उपचारको बारेमा यो यो गरियौं, सहिद घोषणा यतिको भयो यति बाँकी छ, फलानो फलानो मुद्दा फिर्ता भयो, फलानो फलानोको बाँकी छ, हाम्रा यी यी माग पूरा भयो, यी मागहरु पूरा भएन भनि प्रष्ट रुपमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ । त्यसैले केही गर्नुभन्दा पहिले जनतामा जानुपर्छ जनतालाई हरेक कुरा प्रष्ट पारिदिनुपर्छ, जनताले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ अनि मात्र अरुतिर लाग्नुपर्छ । जनतालाई जानकारी दिएर गयौंं भने त्यसको जस अपस सबैमा जान्छ । फोरम नेपालले सही गर्यो गलत गर्यो भन्ने तर्फ म जान्न चाहन्न ।
राजपाको बैठकमा उपेन्द्र यादवको निकै आलोचना भयो नि त ?
–त्यसलाई आलोचना भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा । एउटै मोर्चामा रहेर एउटा पक्षले अलि फरक निर्णय गर्छ भने मोर्चामा रहेका अन्य सहकर्मिले त्यसको बारेमा कुरा गर्नु स्वभाविक हो । मोर्चामा हुँदाको बखत जे सहमति र छलफलहरु भएको थियो त्यसको विपरित उपेन्द्रजी जानु भयो त्यति कुरामा मात्र भएको हो । र, एउटै मोर्चामा काम गरेपछि कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । अर्को कुरा उपेन्द्रजी मोर्चामा हुँदा पनि अलि फरक किसिमले हिड्नु हुन्थ्यो । मोर्चाका सबै दल एकातिर उपेन्द्र यादवको अर्कोतिर जानु हुन्थ्यो । र, अहिले पनि उहाँले त्यही गर्नुभएको छ त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
मधेशी मोर्चा समाप्त भएको हो त ?
–अहिले समाप्त भएको हो भनि नभनौं । पहिला सात पार्टीको मोर्चा थियो । अब दुई पार्टीको भयो । अब यो दुई पार्टीको मोर्चालाई कुन विधि र प्रकृया अनुसार चलाउने हो त्यसका लागि छलफल गर्न बाँकी नै छ । यही संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा नाम राख्ने हो कि अरु कुनै नाम दिने हो, यसमा मोर्चामा दुई दल मात्र बस्ने कि अरु दलहरु पनि समाहित गराउने त्यस विषयमा पनि छलफल बाँकी छ । अहिले हामी एकीकृत पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न तिर लागेका छौ । त्यसमा समय दिइराखेका कारणले मोर्चाका बारेमा सोच्न सकिरहेका छैनौ तर मेरो विचारमा मोर्चा टुट्नु हुँदैन मधेशलाई यसको आवश्यकता छ ।
सरकारबाट लिइसकेको समर्थन फेरि कन्टिन्यु गर्ने राजपाले निर्णय गर्ने कुरा बाहिर आएको छ नि यो विषय के हो ?
–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा हाम्रो आवश्यकता परेको थियो । हामीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले दुईटा कुरा बडो स्पष्टका साथ राख्नु भएको थियो कि मधेशी मोर्चाको माग अनुसार सविधान संशोधन गर्नेछौ, र सविधान संशोधन भएपछि मात्र चनुावमा जानेछौ, सविधान संशोधन नभएसम्म कुनै प्रकारको चुनाव हुँदैन भन्नुभएको थियो । त्यही बीचमा अर्थात मंसिर १४ गते सविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुभयो । तर त्यो पारित नगराई स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने तिर लाग्नुभयो । सविधान संशोधन पनि भएन, र स्थानीय तहको चुनाव पनि गराउन लाग्नुभयो । हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार सरकारले कुनै काम अगाडि बढाएन अनि हामीलाई लाग्यो कि प्रचण्डलाई जीलाई हाम्रो आवश्यता छैन त्यही भएर हामीले समर्थन फिर्ता लियौं । त्यसपछि प्रचण्डले पहिला पेस गरेको संशोधन विधेयक प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो जसमा मधेशी मोर्चाका केही मागहरुलाई सम्बोधन गरिएको थियो । पछि परिमार्जन सहित विधेयक प्रस्तुत हुन लाग्दा हामीले भनेको जस्तै हाम्रो भाषामा विधेयक प्रस्तुत भयो त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । अर्थात सरकारले हाम्रो लागि यतिका इमान्दारीपूर्वका लागेका छन्, हाम्रो लागि चुनावको मिति एक महिनाका लागि सारेको छ, हामीले माग गरे अनुसार स्थानीय तहको सँख्या बढाउने कुरा गरिरहेको छ । अर्थात हामीप्रति यतिका सकारात्मक भएको कारणले हामीले सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छौ भनेका छौ ।
तर मोर्चाका एक पक्ष फोरम नेपालले सरकारबाट लिएको समर्थन फिर्तालाई हालसम्म यथावत नै राखेको छ, यसको बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ ?
–यो सत्तागठबन्धनको घटकमध्येको एक फोरम नेपाल पनि हो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भएका तीन बुँदे सम्झौतापत्रमा उपेन्द्र यादवको पनि हस्ताक्षर रहेको छ । अब यी सबै प्रकृयाको बारेमा उहाँले आफैले ख्याल गर्नुपर्ने हो । राजनीतिमा विधि र प्रकृयाको महत्व छ । सायद सबैले मानेर जान्छ होला ।